लिलामीमा गाडी वा मोटरसाइकल किन्ने हो ? यी हुन् बिक्रीमा रहेका सवारीसाधन
लिलाम बिक्रीमा रहेका गाडी वा मोटरसाइकल किन्न चाहनेका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सवारीसाधनको बिक्री खुला गरेको छ। पुराना सवारीसाधनको लागि न्यूनतम मूल्य तोकेर उसले सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट बिक्री खुला गरेको हो।
निसान र किया जीप, हुन्डाई गेज, टोयोटा इको कार तथा २ वटा स्प्लेन्डर मोटरसाइकल बैंकले लिलामी बिक्रीमा राखेको छ। इच्छुकले बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको सेवा विभागमा गई ति सवारीसाधनबारे हेर्न तथा विस्तृत रुपमा बुझ्न पनि सक्नेछन्।
प्रतिफारम २ हजार तिरेर बोलपत्र पेस गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी साउन १७ गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ।
बोलपत्रका साथ बोलपत्र जमानत वापत आफुले कबोल गरेको रकमको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालय, थापाथलीमा रहेको खाता नं. ११०९९०१ ०११ ००० ५२४ मा नगद जम्मा गरेको सक्कल भौचर समावेश गर्नुपर्ने छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ७, २०७४, १२:५६:३८